Wasiir Denmark iyo maraakiib dagaal oo tagtay Somaliland - BBC Somali
Wasiir Denmark iyo maraakiib dagaal oo tagtay Somaliland
26 Oktoobar 2010
Image caption Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud
Wafdi ka kooban shan xubnood oo ka socday Dawlada Denmarka ayaa maanta Hargeysa kula kulmay madaxweyne Axmed Siilaanyo iyo wasiiro ka tirsan xukuumada Somaliland.
Waxaa hogaaminaayay wafdiga wasiirka horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Denmark Mr Seron Bind.
Shir ay ku yeesheen labada dhinac Hotel Maansoor ee Hargeysa ayaa waxay ka hadleen xoojinta mashaariicda.
Dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, biyaha, miino saarka, iyo maamul wanaaga ee Denmarka ka wado Somaliland.
Sida uu wasiirka arrimaha dibada ee Somaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar u sheegay BBC, waxaa wasiirka ka socday Denmark uu soo gaarsiiyay Dawlada Somaliland wejigii ugu horreeyay ee taageero dhaqaale oo toos ah, laakiin ma sheegin Maxamed Cabdillaahi inta ay tahay dhaqaalaha la guddoonsiiyay Somaliland.
Xukuumada somaliland ayaa wafdiga u gudbisay qorshaha mashaariicda ay mudnaanta siineyso.
Dhinaca kalena, waxaa maanta maanta markii ugu horeeyay xeebta magaalada Berbera yimid laba markab oo kuwa dagaalka ah ee ciidamada badda ee dawlada Britain.
Saraakiil iyo ciidamo kaga soo degay maraakiibtaasi laba laash iyo sarkaalad sare oo ka soo duulay Addis ababa ayaa xarunta taliska dhexe ee ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland kula kulmay madax ka socotay Somaliland iyo maamulka gobolka Saaxil ee Berbera.
Waxay la kulmeen taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland Axmed Aw Cismaan, taliye xigeenka boliiska Korneyl Cabdiraxmaan Fooxle, gudoomiyaha gobolka saaxil Ramaax Cali Hayste iyo Duqa Berbera Cabdalla Maxamed Carab. Lama sheegin ujeedada socdaalka maraakiibtaasi oo saacado joogay Berbera iyo waxa ay ka wada hadleen labada dhinac.